Multimedia - Linux Vakapindwa muropa | Linux Vakapindwa muropa (Peji 2)
Kana iwe uine mashoma emamwe mapikicha uye uchida kuashandura kuva vhidhiyo, seyesiraidhi, unogona izvo nyore paLinux
Rhyme inoridza mimhanzi inoridza ine yakachena interface inoyeuchidza chaizvo nezveMusic app iyo Apple inoshandisa pane iOS uye macOS.
xrdesktop: shandura keyboard yako ive chaiyo chaiyo nzvimbo
Iyo xrdesktop chirongwa chinokutendera iwe kushandura iyo keyboard kuita chaiyo chaiyo nzvimbo yekuvandudza kugadzirwa
cmus ndeye minimalist yekuraira mutsara wemimhanzi mutambi wakanakira avo vedu vari kutsvaga chimwe chinhu chakajeka pane Unix-senge masystem.
Kuburitswa kutsva kweOpenShot vhidhiyo mupepeti yasvika. Shanduro 2.6.0 haina kujairika, uye inounza nhau dzinotyisa
KDEnlive 21.08: kuvhura iine akawanda maficha maficha
Kdenlive 21.8 inouya nekuwanda kwekuvandudza uye nhau dzaunofanirwa kuziva nezvadzo, pamwe neakagadziriswa akagadzirwa kuUI yayo
PineNote: yakavhurwa sosi eReader nePen rutsigiro
PineNote chimwe chigadzirwa chitsva chinouya se e-Reader pakuverenga kwako uye nerutsigiro rwepeni yedhijitari. Uye yakavhurika-sosi ...
Audacity: Idzo Dzakanakisa Dzimwe nzira dzaunogona kushandisa
Audacity iri kukonzera kukakavara neshanduko yevaridzi uye ruzivo rwunotora. Asi panogara paine dzimwe nzira ...
Maitiro ekuisa Apple iTunes pane yako Ubuntu distro
Kana iwe uine Apple zvishandiso, iwe zvechokwadi uchada kuziva kuti iwe unogona kuisa iTunes pane yako Ubuntu kugovera.
Kana iwe uri anodya zvemukati, iwe uchada kuziva Photocall TV, chikuva chekutarisa kuwanda kweTV uye redhiyo chiteshi mahara
Audacity chishandiso chakavhurika sosi yekugadzira nekugadzirisa maodhiyo faira. Zvinoenderana newandaishanda naye Pablinux, kwete ...
MESA madhiraivha ikozvino anotendera OpenGL uye Vulkan mifananidzo API kunyorera "kutaura" kune mumwe nemumwe
Ungashandura sei MTS Vhidhiyo kune Imwe Fomati paLinux neVLC
Kana iwe uine vhidhiyo muMTS fomati uye iwe uchida kuishandura kune imwe fomati, seAVI, unogona kuzviita muVLC paLinux seizvi ...
Pluto TV inowedzera maviri matsva emukati chiteshi kune yayo yekushambadzira chikuva uye yatove inowedzera makumi matanhatu nematanhatu makwara kune raibhurari yayo
Spotify: kugadziriswazve kweiyo app yeLinux desktop
Kana iwe uchida mimhanzi, uchanyatso kuziva yakakurumbira kumhanyisa mimhanzi sevhisi Spotify. Iyo yeSweden app yakavandudza maitiro ayo muLinux
MUSE Boka rakawana kodzero kune edhiyo edhita Audacity, imwe yeanonyanya kuzivikanwa mune yakavhurika-sosi yepasi
HandBrake - Vhura Sosi Vhidhiyo Transcoder
Vhidhiyo transcoding kana shanduko yakajairika, kuti ugone kuzviita, iwe unogona kutarisira Handbrake yeLinux
Natron: node-based compositing software
Natron haina kuzivikanwa kune vazhinji vashandisi veLinux, asi inonakidza kwazvo node-based compositing software
Cinelerra: echimurenga app yekugadzirisa vhidhiyo
Kana iwe uchishanda muGNU / Linux uye uchida kugadzirisa vhidhiyo, saka iwe unofanirwa kuziva iyo Cinelerra application, chirongwa chekuchinja chechinangwa ichi
Mattermost Desktop: imwe nzira kuSlack yeLinux
Kana iwe uchida Slack chikuva, iwe zvirokwazvo uchada kuziva iyi imwe nzira inonzi Mattermost Desktop yeLinux
Kana iwe usingazive Motionbox, iri rakanyanya kusarudzika browser, nekuti iri vhidhiyo browser. Iyo software yauchada
Hushboard: chirongwa chinoshanda chekusarekodha uchitaipa
Kana iwe urikurekodha zvimwe uye uchida kumira kurekodha uchitaipa, Hushboard ndizvo zvauri kutsvaga
Spot mutambi wepano weSpotify anotaridzika zvakanyanya kunaka muGNOME uye yakazara nezvinhu zvinotonhorera.
Kana iwe uchida musanganisi paLinux kuti uite ako ekutanga matanho seDJ, iwe unofanirwa kuziva Shanduko DJ
Iwo akanakisa IPTV maapplication aunogona kuisa pane yako GNU / Linux distro
Aya ndiwo akanakisa IPTV anowirirana maapplication iwe aunogona kuisa pane yako aunofarira GNU / Linux kugovera uye unakidzwe zviuru zvematanho
About Kdenlive uye OpenShot. Huru maficha
About Kdenlive uye OpenShot. Isu tinomhanya kuburikidza nezvakakosha maficha evaviri evhidhiyo edhita
Asina-mutsara mavhidhiyo edhita. Basics uye mbiri sarudzo dzeLinux
Asina-mutsara mavhidhiyo edhita. Isu tinotsanangura hwaro hwekuti inoshanda sei uye tinonyora dzimwe sarudzo dzeLinux
OBS Studio 26.0: ruzha rwekudzvinyirira kugadzirisa uye nezvimwe
Kana iwe uchida inonakidza yakavhurika sosi software OBS Studio kutora zvinoitika pane desktop yako kana yekutenderera ...
Stremio: inonakidza imwe nzira kune Kodi kana izvo zvaunofarira zviri kutenderera
Muchikamu chino isu tichataura nezve Stremio, imwe nzira kune Kodi, asi iyo inonyanya kutarisa mukushambadzira zvemukati.
Muchikamu chino tichakudzidzisa maitiro ekuisa Kodi 19 Matrix pane yako Ubuntu-based operating system usingamiriri kuburitswa zviri pamutemo.
Polar: maneja wema ebook, maPDF uye… ishandisi yepamhepo yewebhu?
Mune dzino zvakateedzana kuti uwane mamwe mapurogiramu asingazivikanwe, nhasi inguva yekutendeuka kwaPolar, maneja ane mabasa akawanda auchada.
Audacity 2.4.2 inouya neakagadziridzwa wxWidgets raibhurari uye kugadzirisa akasiyana mabugs
Audacity Team yakaburitsa Audacity 2.4.2, iine hukuru hukuru kuve iyo yakagadziridzwa wxWidgets raibhurari uye kugadzirisa akati wandei anozivikanwa mabugs.
VLC 3.0.11 inouya kunyanya kugadzirisa bugs uye kugadzirisa kusagadzikana
VideoLan yakaburitsa VLC 3.0.11, diki dudziro kune yayo inozivikanwa media midhiya iyo inosanganisira chengetedzo inowedzera.
Tartube application yatinogona kufamba nayo kuburikidza nemavhidhiyo akasiyana mawebhusaiti, kurodha zvirimo uye nezvimwe zvakawanda.
AudioMass: yemahara "Audacity" yatinogona kushandisa zvakananga kubva kubhurawuza
AudioMass ndeye odhiyo wave dhizaini iyo yatinokwanisa kuita marudzi ese ekugadzirisa kubva kubhurawuza uye pasina kuisa imwe software.
Audacity 2.4.0 yasvika mushure memwedzi mitanhatu yekuvandudza ine inonakidza mitsva maficha senge yakagadziridzwa nguva yekushandisa.
MythTV 31 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwevhidhiyo kududzira
Mushure menguva ingangoita gore rekuvandudza, MythTV 31 yave kuwanikwa, yazvino vhezheni yeiyi software yakavandudza zvakanyanya kudhindaini kwevhidhiyo.
Audacious 4.0: dombo rekare rakagadziriswa, rakavakirwa paQt 5 uye rinounza zvese izvi zvitsva maficha
Audacious 4.0 yasvika mushure menguva yakareba yekusimudzira pamwe neshanduko huru kubva pakuenda kuQt 5. Ichakurumidza kusvika pane yako Linux kugovera.
Shortwave, yapfuura Gradio inochinja kusimudzira ruzivo kana uchiteerera redhiyo
Shortwave ndiyo mhedzisiro yeiyo shanduko yeGradio, chishandiso chinotibvumidza isu kuteerera nhepfenyuro dzakasiyana.
OBS Studio 25.0: kunze nekuvandudza kwakawanda kwemavhidhiyo
OBS Studio 25.0 iri kunze, chirongwa chikuru chekurekodha vhidhiyo yezvinoitika pachiratidziro uye kuyerera kunouya nekuvandudzwa kutsva mune iyi vhezheni
Unogona kunge uchitoziva nezvesimba ffmpeg software chishandiso, asi unogona kunge usiri kujairana neiyo ffmpegfs faira system yemultimedia.
OpenShot, imwe yeakanakisa evhidhiyo edhita anowanikwa eLinux, yasvika ichiunza rutsigiro rweBlender 2.8 nekumwe kugadzirisa.
Mockuuups Studio: chirongwa chinonakidza chekugadzira mockups
Kana iwe uchida kuziva kuti chii chinonzi mockups uye kuti ungavaita sei otomatiki uye nekukurumidza kwazvo, Mockuuups Studio chirongwa chako
KDE Nharaunda yakaburitsa Krita 4.2.8, nyowani yekugadzirisa kuburitswa iyo yasvika kunyanya kugadzirisa bugs.
HandBrake 1.3.0 inosvika ine interface yekuchinja uye dzimwe nhau dzinonakidza
Tamba mavhidhiyo mune iyo terminal ... nekuda kwekuti iwe unogona
Muchikamu chino tinokuratidza maitiro ekutamba mavhidhiyo pane iyo terminal. Ivo havazoonekwa mu4K, asi isu tinozviita nekuda kwekuti tinokwanisa.
Byte idiki application yekuteerera kumimhanzi muLinux inoyeuchidza kwazvo iyo iPhone nekuda kwekuita kwayo uye kuchena.
Muchikamu chino tinotsanangura mafarire e DRM pane yedu Raspberry Pi kuti iwe ugogona kuteerera kumimhanzi uye nekuona mavhidhiyo.
Yange iri nguva yakareba, asi Kodi 18.4 Leia yave kuwanikwa yeiyo Raspberry Pi
Kodi 18.04 Leia yave kuwanikwa kuisa paRaspbian, iyo sisitimu yekushandisa yeRaspberry Pi, kubva kumahofisi epamutemo.
eSpeak / Gespeaker: Maitiro ekushandura mavara kuti ave Kutaura
Neiyi dzidziso iwe unozodzidza maitiro ekushandura zvinyorwa kuita kutaura kubva kune yako yaunofarira GNU / Linux distro uchishandisa espeak / Gespeaker kutaura synthesizer
Virage GNU / Linux: iyo Spanish distro yekushanda neodhiyo nevhidhiyo
Virage GNU / Linux kugoverwa kweSpanish kunogadzirirwa kushanda nemaodhiyo nemavhidhiyo mafaera, ndiko kuti, yakagadzirirwa multimedia
Shotcut 19.09 inosvika ine mafirita matsva uye dzimwe nhau dzinonakidza
Shotcut 19.09 iri pano uye inouya nezvinhu zvakawanda zvitsva kuyedza kutipwisa kuti iyi imwe nzira yeKdenlive.
LiVES, yekare uye isingazivikanwe vhidhiyo mupepeti yeavo vachiri kutsvaga dzimwe nzira
LiVES ndeyekare kwazvo vhidhiyo mupepeti uyo anotipa isu zvese zvatingave tichida. Muchikamu chino tinokuratidza maitiro ekuiisa pane yako PC.
KDE Nharaunda yakaburitsa Krita 4.2.5, ichifungidzira kuburitswa nekuda kwehukuru hukuru mune zvekhibhodi mapfupi apo mamwe maturusi aishanda.
AMD Radeon 5700 Series uye AMD Ryzen 3rd Gen vanosvika ...
AMD Radeon 5700 Series uye 3rd Gen AMD Ryzen, new hardware yeLinux yako nyowani. Iyo kernel yatove ichitsigira uye inoita kuti zvive nyore kwauri kuti ubudise maficha matsva
VLC 4, maitiro ekuiyedza paLinux pasina kutora chero njodzi
Muchikamu chino tinokuratidza nzira yakachengeteka yekuyedza VLC 4, inotevera HUGE yekuvandudza yeakakurumbira midhiya mutambi.
LMMS 1.2.0: Kana Makore Makumi Ekumirira Achibhadhara
LMMS 1.2.0 iri pano, vhezheni inosvika makore mana mushure meiyo yapfuura iine zvakawanda zvinonakidza maficha. Kumirira kwaive kwakakodzera.
Olivia: online radio neYouTube mune mumwe mutambi
Olivia mutepfenyuro redhiyo inoridza iyo zvakare inotibvumidza isu kugadzira YouTube zvinyorwa uye kurodha mimhanzi yekuteerera kunze kwenyika.
Ini ndinovenga, rese webhu redhiyo iwe yaungade mune imwechete app
Ruvengo chirongwa chiri nyore chinowanikwa seSnap iyo inoisa kwese kwese maredhiyo aungade, uye ese emahara.
Zvikumbiro zvevaimbi, kunyanya kana iwe uri gitare
Muchikamu chino tinotaura nezve akati wandei mafomu evamuimbi ayo anoita kuti zvinhu zvive nyore kwauri paunenge uchigadzira nekugadzirisa odhiyo.
Maitiro ekutenderera vhidhiyo pane yangu Linux inoshanda system PC
Ndingaite sei kutenderera vhidhiyo muLinux? Mune ino posvo isu tinokudzidzisa iwe kuzviita sei nechirongwa icho iwe chaungave watove watoisa paPC yako.
Lollypop ndiyo ingangoita yekupedzisira mimhanzi mutambi weLinux. Muchikamu chino tinokuratidza ayo akanakisa mashandiro uye kwazvinotadza.
Banshee inogadziridzwa pamwe nedzimwe shanduko kune yayo mushandisi interface
Mutambi wemimhanzi weBanshee akagamuchira gadziriso mumaawa mashoma apfuura. Pane zvinonakidza zvinoonekwa shanduko.
Dai iwe wanga wakamirira laputopu yebasa rakasimba rekuita kwepamusoro nekutamba, iwe uri mune rombo rakanaka, ino Kisimusi iwe unozogona kuve neSlimbook Eclipse
OpenShot inowedzera animated vhidhiyo masking uye zvimwe ...
OpenShot, imwe yeakanakisa ekugadzirisa mavhidhiyo mapurogiramu aunogona kuwana muLinux nyika, ikozvino inouya nenhau dzakakosha
Nhanho nhanho dzidziso: chinja MKV kuAVI
Kana iwe uchida kushandura mafomati e multimedia senge mavhidhiyo, isu tinokuratidza maitiro ekuenda kubva kuMKV kuenda kuAVI mune ino yakapusa dzidziso yeLinux
Diki dhairekitori pane mashanu akanakisa podcast mashandisiro atinogona kuwana kuteerera kune chero podcast kubva kuGnu / Linux desktop ...
Soundnode SoundCloud desktop mutengi yakavakirwa paElectron
Soundnode ndeye yemahara, yakavhurwa sosi, muchinjika-chikuva application iyo inopa desktop desktop ye SoundCloud kwaunogona kuteerera ...
Isu tinokuudza iwe zvese zveiyo nyowani vhezheni, Krita 4.1, ine zvakawanda zvekuvandudza uye nhau
Parole izere, yemahara uye yakavhurwa sosi midhiya mutambi akanyatsogadzirirwa iyo Xfce desktop nharaunda, asi zviri pachena
Isu tinokuudza zvese kugadzirisa iwe zvaunogona kuwana muPulseAudio 12, iyo vhezheni nyowani yeiri ruzha server
Vatambi veMultimedia yeGnu / Linux; mapurogiramu akanakisa ekuona mafirimu uye kuteerera mimhanzi
Chidiki dhairekitori ine yakakurumbira uye inozivikanwa multimedia vatambi varipo kune yedu Gnu / Linux kugovera. Zvese zviri mahara uye isu tinogona kuzviisa kubva kune zviri pamutemo marekodhi ekuparadzira ...
Mps-youtube ndeye yakavhurwa sosi multiplatform application yakanyorwa muPython chirongwa chemutauro uye yakavakirwa pa mpv chinova chikumbiro chinotibvumidza kushandisa iyo terminal kutsvaga, kutamba uye kurodha mimhanzi.
Maitiro ekuisa Adobe Cloud kunyorera pane chero Gnu / Linux kugovera
Nongedzo diki yekuti ungaisa sei Adobe Cloud kunyorera mune chero kupi kweGnu / Linux kugovera, zvese nekuda kweiyo PlayOnLinux yakateedzerwa uye script inotibatsira pakuisa software iyi ...
Leia richava zita remadunhurirwa rekuti Kodi 18, vhezheni ichave mutero kune protagonist weStar Wars uye kunyanya kune saga pachayo inotendeuka makumi mana ...
Chii chinonzi OpenShot? Isu tichakuudza kana iwe usingazive ...
Chokwadi iyi Kisimusi iwe yaunoda kuita chipo chakakosha uye kugadzira vhidhiyo kana kuumbwa nemifananidzo uye kurira kutumira ...
SMACH Z: koni inobata ruoko yakaitwa muSpain
SMACH Z ibasa rinochengetwa rakagadzirwa muSpain iro rava kuita nekupa mari nekuwanda kwevanhu ...
Kdenlive 16.08.0 inowedzera chaiyo-nguva kupa uye 3-poindi yekugadzirisa.
Imwe yeanonyanya kufarirwa mavhidhiyo ekugadzirisa maturusi muGNU / Linux nyika ndiKdenlive, iyo inogadziridzwa uye inowedzera zvinonakidza zvitsva maficha.
Kune dzimwe nzira dzechinhu chero chipi zvacho muGNU / Linux, uyezve, zvakare zveApple iTunes. Iko kunozivikanwa kushandiswa kwe ...
Isa Kodi pane Elementary OS
Mirairo miviri chete ndiyo inotiparadzanisa nekuisa Kodi pane Elementary OS, kuti tinakidzwe nemapurojekiti maviri anonakidza kwazvo.
WebTorrent Desktop, rwizi kutenderera kuChromeCast, AirPlay kana chero DLNA chishandiso
Kushanda zvakada kufanana nePopcorn Nguva, inouya WebTorrent Desktop, chishandiso chekumhanyisa mavhidhiyo nemumhanzi uchishandisa BitTorrent.
Isa Kodi uye wedzera-ons pane yedu Linux distro
Midhiya nzvimbo dzaive mumafashoni, uye ndinoti dzaive nekuti izvozvi nemaSmart TVs uye dzimwe sarudzo senge mapiritsi uye ...
MuseScore Nongedzo: Yakakura Chikamu Chikamu YeLinux Yako Distro
MuseScore ishamwari yako yepamoyo kunyora, kugadzirisa uye kubata mamakisi ako ekugovera paLinux. Iyo yehunyanzvi uye yemahara software.
MiniTube: tarisa Youtube mavhidhiyo asina Flash Player akaiswa
Mazuva mashoma apfuura takazivisa kuti Oracle haizogadzirise yayo Java plug kubva muna Kubvumbi gore rino….
Rongedza mapikicha muLinux neaya mamwe maPhotohop
Kana iwe uine ruzivo rwakakwana, iwe unogona kuita zvimwe zvakafanana zvinhu zvaunoita neAdobe Photoshop.
Oracle inozivisa kupera kweJava plugin
Adobe yakave nematambudziko mazhinji ekuchengetedza neFlash yayo, yakanyanya kutsamira pairi paInternet yagadzira ...
Dzimwe nguva tinenge tave kuona kuti mamwe mavhidhiyo eAVI kana mamwe mafomati ane akakuvadzwa indekisi uye hatigone kuzvibereka, ...
Isu tinotsanangura maitiro ekurodha pasi nziyo dzeYouTube kana mavhidhiyo kubva kuLinux uchishandisa akawanda maturusi uye mawedzero eiyo Chrome kana Firefox browser.
Spotify, iyo yekuSweden mimhanzi app iyo yakachinjisa nzira iyo iyi zvinyorwa zvinogoverwa, ikozvino isu tinokudzidzisa iwe maitiro ekuiisa pane yako Linux distro nhanho nhanho.
Mixxx 2.0 ndiyo vhezheni itsva iyo yanga ichitarisirwa kwemakore maviri ekuvandudza. Iyo software yekusanganisa uye kushanda nemumhanzi kuti uve wechokwadi DJ.
OpenELEC 6.0: inosvika neLinux kernel 4.1
Kuve uine up-to-date uye yemahara multimedia nzvimbo inogoneka neOpenELEC 6.0, iyo nyowani vhezheni inouya neLinux 4.1 uye Kodi 15.2 pakati pekuvandudzwa kwayo.
Mozilla Firefox inoisa imwe chipikiri mubhokisi reFlash Player
Sezvo isu tichinyatso kuziva, Adobe Flash Player ine mazuva ayo akaverengwa, isu takatotaura nezve ayo mahombe ekuchengetedza maburi uye kuti yaive software umo ...
Rufu rweAdobe Flash Player inoita kunge isingadzivisike
Wese munhu anoziva kuti Adobe Flash Player ine maburi mazhinji ekuchengetedza uye ndiyo yakakonzera matambudziko ekuchengetedza pane ese marudzi emidziyo.
Kore chirongwa chepamutemo cheiyo Kodi chirongwa icho chichatibatsira isu kuve neremote control yeiyo Kodi software chete tichishandisa yedu Android smartphone.
YouTube Viewer - Tsvaga, Tamba, uye Dhawunirodha YouTube Vhidhiyo kubva kuDesktop yako
YouTube Viewer inotibvumidza kushandisa yedu YouTube account kunze kwebrowser, iine mukana wekutsigirwa muvatambi vakaita seVLC kana MPlayer.
Akanakisa Edhiyo Edhita eLinux
Linux inopa maturusi akanakisa ekugadzirisa odhiyo, uye mune ino runyorwa tinokuratidza zvimwe zveakanakisa uye zvakanyanya kufarirwa.
Mashandisiro aungaita Netflix pane yakavhurikaSUSE
Matanho maviri akareruka ese anotiparadzanisa neNetflix mune yakavhurikaSUSE: isu tinongofanirwa kuisa Pipelight uyezve kugadzirisa Mushandisi Wemushanduri.
Ungashandura sei MKV Vhidhiyo Audio kubva kuDTS kuenda kuAAC3
Nekushandisa yakapusa bash script isu tinokwanisa kushandura edu ese maMKV mafaera kupfuudza odhiyo kubva kuDTS kuenda kuAAC3.